Iza no ho tompon’ny teny farany?
"Fa Andriamanitra no Mpitsara; mampietry ny anankiray Izy ary manandratra ny anankiray kosa." Salamo 75:7
"Ny Avo Indrindra no manapaka amin’ny fanjakan’ny olona ka manome izany ho an’izay tiany." Daniela 4:29
Raha mijery tsy miangatra izao tontolo izao sy ny tantarany isika, dia hahita fa mitana toerana tena lehibe Andriamanitra, mba hitehirizany azy. Toa mibaiko ny zava-drehetra ny herisetra sy ny hafetsena, ampiasaina ho an’ny tombontsoa na ny hambo. Na eo amin’ny isam-batan’olona na eo amin’ny firenena, dia matetika no ampandeferina ny rariny, manoloana ny hery. Koa efa hatry ny ela ny zanak’olombelona no tokony ho rendrika tao anaty korontana tsy hay lazaina, na ho nanjakan’olona na taranaka iray nanana hery anapotehana na anandevozana ny mpanohitra rehetra.
Tamin’ny ampahany ihany anefa izany no tanteraka, na be toy inona aza ny fankahalana sy ny herisetra mandatsaka aina, ary na be koa aza ny ezaka nataon’ireo mpitarika samihafa, hanjakana maneran-tany. Nahoana? Satria, nisy hatrany fotoana nipoirana tranga iray tsy nampoizina, na tranga madinika nifampitohitohy tsy tsapa akory, nandrava izay hery toa nandresy, nampipoitra hery iray hafa, namerina indray ny fifandanjana, ka afaka niaina tsy tsara tsy ratsy teny ihany ny zanak’olombelona.
Izany tranga tsy hay hazavaina izany, izay manova tampoka ny fizotran’ny tantara, dia nantsoin’ny olona hoe anjara, vintana, kisendrasendra, na tody. Ampahafantarin’ny Baiboly antsika sy ireo taranaka mpino mifandimby, fa Andriamanitra, Ilay Avo Indrindra sy Ilay Marina, dia manatanteraka hatrany ireo drafitra napetrany: Izy no ho tompon’ny teny farany eo amin’ny tantaran’ny olombelona, toy ny naha tompon’ny teny voalohany Azy ihany koa. Ohatra ny manjakazaka vetivety ny ratsy, nefa ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahamarinany no handresy, tahaka ny efa nandreseny teo amin’ny fiainan’olona maro, dia ireo izay mino Azy!